Dadka u dhintay Coronavirus gudaha Somaliya oo gaartay 72 qof | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dadka u dhintay Coronavirus gudaha Somaliya oo gaartay 72 qof
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Feyruska Karoona waxay ku xaqiijisay in 24-kii saac ee ugu dambeeyay guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay 97 xaalado cusub oo COVID-19. Waxaa cudurka ka bogsooday 45 qof, waxaana geeriyooday 5 bukaan.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa caddeysay in 69 kamid ah bukaannada la xaqiijiyay ay rag yihiin halka 28-ka kale ay yihiin haween.
35 kamid ah bukaannada cusub waxaa laga diiwaan geliyay gobalka Banaadir, Somaliland 32, Koonfur Galbeed 22 iyo Puntiland 8 qof.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 1,828 waxaa bogsootay guud ahaan 310 ruux. Halka 72 ruux oo kale ay u geeriyoodeen cudurka.
Dadka u dhintay Covid-19